Nin dameer dabadii kadegay meel uga toogoonbuu waayay | Salaan Media
Home Articles Nin dameer dabadii kadegay meel uga toogoonbuu waayay
Nin dameer dabadii kadegay meel uga toogoonbuu waayay
Waxaan doonayaa inaan wax yar ka idhaahdo arinka Golaha lagaga dhawaagay Somaliland iyo saska ay kaqaadeen Dawladda Somaliland iyo Golihii Wakiiladu.
Marka hore waynu wada ogsoonahay inuu dalka Madaxweyne uyahay Axmed Maxamed Maxamuud oo ay dadku doorteen si uu ugu adeego.
Waxa kale oo iyana biyo kuma dhibcaan ah oo aan shaki kujirin Golaha Wakiiladu iyna ay yihiin kuwii dadka kawakiilka ka ahaa.
Haseyeeshee waxa iswaydiinle Dawladdu makasoo baxday xilkii loo igmaday? Golaha Wakiiladuse makuhadlaa afkii shacabkii soo doortay?
Illaah baydilidoonee Odayaashii ladoortay irbad dhuub gelinwaaye…
Soomaalidu waxay kumaahmaahdaa dherigaba karka kulaylkaa kakeenay waxaan laayahay kulaykaasi waakan maanta keenay Golaha Toosinta.
Ayaantay ilxuntahay bay Illaah leedahay canshee, Odayaashani waa ragii ayaantii hore ee faqashtii umadda ukacay ee katuuray heeryadii maanta oo ay kabasii ilxuntayna waajibbaasaaran cidkafuratana ay waayeen,
waddankana lexejeclo badan baakahaysa.Waxaan filayaa odayaashu waxay leeyihiin nin dameerdabadii kadegay meel uga toogoon buuwaayay. Waayo dawladdii cid toosisa ama latalisa ayaan jirin, hayhay iyo wixii hore loo eeday mooyaane.
Hadaba waxaan leeyahay Madaxweynaha Somaliland Md Axmed Maxamed Maxamuud waayo’arag baadtahay wixii hore usoodhacayna waad ogayd ismarooninta lama mahdiyo raguna walaal wuxuu kudhaamo lasoowaaye talada qaado wixii khalad kaaga khacayna six.